UBill Gates ngo-2017: "Esi sifo singekabikho kwiscompyuter" uMartin Vrijland
Hayi, ayilo iyelenqe lentsholongwane le-corona! La ngamazwi kaBill Gates ngoFebruwari ka-2017 ngexesha lenkomfa yezokhuseleko eMunich:Ubhubhane olandelayo unokwenzeka nje kwiscreen sekhompyuter yomntu onqolobi ofuna ukusebenzisa ubuqhetseba bemfuza ukwenza inguqulelo yentsholongwane."Kutheni le nto iGates ingenza ingxelo enjalo kwaye sinokugqiba kwelithini? Qala ujonge ingxelo yakhe kwividiyo engezantsi uze uqhubeke ufunde.
UGates utsho ngokucacileyo ukuba kwimigaqo yonke intsholongwane inokwakhiwa. Oku kunokwenzeka kuba siphila kwixesha le-nanotechnology kunye nexesha apho i-DNA kunye ne-RNA ilulwazi okanye idatha. Ke unokwenza izinto kwilebhu. Yile nto uneenkampani ezigxila kulwakhiwo lobugcisa I-DNA strand kumyalelo. Umzekelo, ngo-2017 inguqulo eyenziwe ngokupheleleyo yentsholongwane yehashe yaphindwa ngesiseko sekhowudi yemfuza yaloo ntsholongwane, ngokwewebhusayithi. lifecience.com:
Iinzululwazi ziye zaphinda zaphinda zabuya ilungu losapho lentsholongwane kwelebhu.
Le ntsholongwane, intsholongwane yehashepox, ayinabungozi ebantwini, kodwa iziphumo ezintsha zibonisa ukuba kunokwenzeka ukuba abantu benze intsholongwane ebulalayo ebulala ilabhoratri. Le ntsholongwane yasuswa emhlabeni ngo-1980, ngokwejenali yeSayensi.
Ukwakha kwakhona intsholongwane yehashe kwakungeyondlwan 'iyanetha, kodwa kwakungafunisi zinto zibanzi. Abaphandi bayalela iziqwenga zeDNA ababezisebenzisa ukwenza le ntsholongwane evela kwinkampani eyenza iziqwenga zeDNA kubaphandi, ngokulandelelana okwenziwe ngasese, kwaye bazithumela ngeposi. Le projekthi ixabisa i-100.000, XNUMX yeedola, kwaye ihlala iinyanga ezintandathu.
Ayisiyomfuneko kwaphela, kuba abaphandi sele bekhuphele kuguquguquko lwentsholongwane lwe-SARS kwilebhu ngo-2015. Kuyaphawuleka ukuba i-SARS yayisele ikho ngelo xesha phakathi kweqela lamaTshawe okuloba ngamahashe. Unyango lweNdalo ipapashiwe Isifundo apho kuchazwe ukuba intsholongwane ka-SARS (evela kusapho lwentsholongwane ye-corona) yaphindaphindeka ukwenziwa kophando:
Ngokusekwe kwezi zinto zifunyanisiweyo, siphinde sibuyile kwakhona intsholongwane ebangela ukusasazeka isigama sobude be-SHC014 kwaye sibonisa ukuphindaphinda kwakhona kwentsholongwane, zombini kwi-vitro (ityhubhu yovavanyo) nakwi-vivo (emzimbeni). Umsebenzi wethu ucebisa ngomngcipheko onokubakho wokuba i-SARS-CoV iphinde ivele ngenxa yeentsholongwane ezijikelezayo kubantu abatsha.
Ngoku ungagqiba kwelokuba intsholongwane yangoku ye-corona e-Wuhan (kwiphondo lase-China lase-Hubei) inokuthi ivele namalulwane, ukuba umngcipheko sele uqaphelekile ngo-2015. Nangona kunjalo, yintoni ecacileyo kukuba uBill Gates wayenyanisile xa wathi ngonyaka ka-2017 ukuba intsholongwane ye-gciwane inokwakheka kwiscreen sekhompyuter.
Ngolwazi lokuba oorhulumente bayakwazi ukuhlawulela imali kunye nemikhosi yokuphakamisa iingalo kwaye emva koko bababize njengabagrogrisi kwaye emva koko balwa nabagrogrisi ngokwabo (ukubamba umhlaba kunye nezixhobo), unokuzibuza ukuba sisebenzisana apha ngohlobo olutsha lobunqolobi okanye uhlobo olutsha lweemfazwe zemvelo, apho kwakhona uhlobo "lweqela labanqolobi" lunokubekwa ityala.
Iingxelo ezimangalisayo zichaza ukuba intsholongwane yangoku ye-corona ibonakala iyaziqhelanisa kwaye iyashintsha. Kuyavela ke ngoko ukuba kukho intsholongwane engenakho ukwenzeka rhoqo (jonga ividiyo engezantsi uze ufundwe):
Ukuba sisebenzisana nesixhobo sebhayoloji apha kwaye esi sixhobo sinokuhlelwa kwakhona kwi-intanethi (umzekelo ngeCRISPR-CAS12 funda kwaye sithathe indawo yokusebenza enokuthi le ndlela yeCRISPR isinikeyo), singayongeza okanye siyithelekise kancinci ne intsholongwane Ukuba intsholongwane (enokwenzeka) eyilelwe ngokwenziwa intsholongwane enikezela ukufundwa nokubhala ngaphandle kwamacingo, ke "abarhanisi" banokuhlala beyihlengahlengisa intsholongwane, ukuze naluphi na iyeza lokuthintela ukuba lingaphuhliswa lingasebenzi.
Ukuba leyo yimeko esifike kuyo, ke intsholongwane phakathi kwabemi ingalwa kuphela kwinto efana nale siyaziyoyo evela kwi-software yeNorton okanye yeMcAfee antivirus.
Ukuba intsholongwane akukho nto ingaphezulu kokuba "yiphakheji yolwazi", isisombululo asifumaneki kulwakhiwo olwenziwe ngokutsha lwasichasene nentsholongwane (kwaye siyifaka ebantwini njengesitofu sokugonya). Emva koko isisombululo sinokufumaneka kulawulo lwe-enzyme eyenza CRISPR-CAS12 inokwenzeka. Emva koko unokudlulisa ngaphandle kwamacandelo oguquko lwentsholongwane (iDNA okanye ikhowudi ye-RNA) kuye nawuphina umntu kwaye ukhubaze intsholongwane ngokwaphula ikhowudi yentsholongwane.
Ngaba oko kuvakala kusengqiqweni kwaye akukho ngqiqweni kuwe? Emva koko jonga kumboniso ungezantsi ukuze ufumane umbono wendlela le CRISPR-CAS12 isebenza ngayo kunye nokufumanisa ukuba asizukujongana noluthi lungeyonyaniso olungaqhelekanga apha. (funda ngokuqhubekayo phantsi kwevidiyo)
Ukuba singabona ibhayoloji ngakumbi nangakumbi 'njengolwazi' kunye nomzimba womntu njengekhompyuter ye-bio-ikhompyuter, inethiwekhi ye-5G ibonelela nge-bandwidth yenkqubo ye-anti-virus esinokuthi sikwazi ukuyithenga ngenkampani yabazukulwana bakaMicrosoft. . Ngokubhekisele koku, kuluncedo ukwazi ukuba iphondo laseHubei sele linokugubungela i-2019G elungileyo ngoJulayi ka-5 (ngokwewebhusayithi hubei.gov)
U-Yiwu, uNobhala Jikelele weZiko lezoNxibelelwano lePhondo i-Hubei, wagxininisa ukuba i-Hubei yakhile izikhululo ezisisiseko ezingama-4.993 ze-5G ekupheleni kukaJulayi, ithathe indawo yesithathu eTshayina, emva kweGuangdong neBeijing. Ngo-2021, iHubei yayiza kwakha izitishi ezingama-50.000 ze-5G ukuze zikhokele kwilizwe.
Sele yincwadi yam bendibhengeze ukuba singahamba ngeflegi enkulu yobuxoki okanye ukusebenza kwengqondo ukwenza ugonyo ngokunyanzelwa kwihlabathi liphela. Kule ncwadi kunye namanqaku am akutshanje bendisoloko ndikhomba kwimfuno yamandla olawulo ukuze ndikwazi ukuguqula inani labemi kwi-intanethi kwindlela ye-transgender transhuman, kumfanekiso otyhidiweyo uthixo womyalelo wehlabathi elitsha (ukuba nguLusifa).
Ukukwazi ukuqaphela i-transhuman (i-cyborg yomntu), zimbini izinto eziyimfuneko. Okokuqala, wonke umntu ufuna iDNA kwaye okwesibini i-enzyme kufuneka ingeniswe kuwo wonke umntu, apho umntu anokuphinda abhale kuyo yonke incindi yeDNA kwi-Intanethi (ngendlela yeCRISPR-CAS12).
Ukufezekiswa kwe-transgender kubonakala njengenkqubo esele iqhubeka iminyaka emininzi. Ndizichaze ngokweenkcukacha eli nqaku.
Ngamafutshane, singathi sinokuba nengxaki engene kulomgangatho omkhulu 'Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo', kuyo ingxaki ibonakala iyintsholongwane engalawuleki kwaye ihlala itshintsha; Iziphumo zinamashumi ezigidi zokusweleka ngenxa yokoyika okukhulu njengoko mpendulo phakathi kwabemi behlabathi kunye isisombululo inokufumaneka ekunikezeleni i-enzyme eyenza isisombululo seCRISPR-CAS12 sikhona: inkqubo ye-antivirus yeMicrosoft. Ngeso sisombululo, kwixesha elizayo, wonke umntu usenokungabinayo intsholongwane, kodwa iMicrosoft inokuthumela kwakhona uhlaziyo olufanelekileyo kwinkqubo yokusebenza komzimba wakho ungacacanga.
Uludwe lwekhonkco lovimba: sciencemag.org, lifecience.com, nature.com, hubei.gov
Ubhubhani weNetflix ': ukuthintela njani ukuqhuma' kwintengiso yokugonyela indawo yonke iSuperHuman-2.0?
INtflix docu 'Ubhubhani: Ungathintela njani ukuqubuka' kuvakala ngathi kukucwangcisa i-Wuhan corona virus
tags: &, 5G, Antivirus, IBill Bill, Bio, eziphilayo, umqhele, coronavirus, CRISPR-CAS12, Dna, eziziimbalasane, SeSiseko, Melinda, indlela, imfazwe, RNA, zokwenziwa, ulwabilo, lokugonya, Wuhan
29 Januwari 2020 kwi-01: 01
Kodwa kukho enye idomasi yedabi ezayo kungekudala, yona iyinyani, kodwa ingabambeki, njenge-cyberpace.
Kusenokwenzeka ukuba ibe yeyona nto intsonkothileyo okwangoku: Kulula ukungcakaza kwaye kunzima ukukhusela kuba akukho ndlela yokuphila ngaphandle kwayo. Sisizinda sebhayoloji.
Iseli ephilayo inomdla kwiikhompyuter, nangona iyinto enobuchule kakhulu, eyenziwe yikhabhoni kune-silicon. Kwentliziyo yayo yinkqubo yokusebenza. Ibhaliwe kwi-DNA nucleotides - iibacteric bits ezichazwe ngendlela engaqhelekanga njenge-Ts, C, Cs kunye ne-Gs okanye ikhowudi yeDNA- kodwa, ngokoko, azifani kangako kwi-zeroes kunye nezo ze-elektroniki software.
Ukubonwa ngale ndlela, iiseli ziyaziqokelela, zingenazinto zinetyhefu, ziyazilungisa, zinamandla amancinci, zine-scal scalable kunye nezixhobo eziguqulayo zekhompyuter. Ngapha koko, nangona ubomi buye bavela ngaphezulu kweebhiliyoni zeminyaka kwaye iikhompyuter zedijithali zenziwe nje amashumishumi eminyaka, uyilo lwazo olusisiseko aluyiyo yonke into eyahlukileyo. Iiseli zixhobo kwaye i-DNA yisoftware. Uye waba yintoni umphumo?
Ibhayoloji, njengezinye iindlela zekhompyuter, inokutshixwa.
29 Januwari 2020 kwi-01: 05
Ndicinga ukuba ivela kwiscreen sekhompyuter ..
I-ps: ividiyo yenziwa efihliweyo
30 Januwari 2020 kwi-19: 31
'Inqanaba lokusweleka kwabantu liphezulu kunelomkhuhlane waseSpain, ke licebo elihle ukulawula ngokukhawuleza ukuqhuma'
Umbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) uzakucacisa ngokuhlwanje ukuba ukuphuma kwe-Wuhan corona virus kungabhengezwa njengengxamiseko kwihlabathi liphela. Inani losulelo landa ngokukhawuleza. Zingaphi iingxaki esinokuzikhathaza ngazo? Kwaye ngaba i-Netherlands yenza okwaneleyo, okanye ngaba amanye amazwe asabela ngendlela encomekayo? Ugqirha onguMarion Koopmans, olilungu lekomiti yeengcali ecebisa i-WHO kule mvakwemini yokujongana nale ntsholongwane, uyacacisa.
29 Januwari 2020 kwi-23: 41
Umnyhadala woThintelo lweNtsholongwane ka-201: Icandelo 1, Intro kunye neMeko yoNyango (i-MCM) Ingxoxo
Imuvi ukususela ngoNovemba 4 - 2019
Apho iqela lezaphuli-mthetho ezinzulu libambe imithambo malunga noko kwenzekayo ... ukuziqhelanisa kwenza ukuba kugqibelele.
Umnyhadala we-201 njengoko umi neglobal phakathi kwe-2 ne-1, i-World ibiyelwe ngu-Ajenda 21 ... bayitshintsha i-Ajenda yabo ibe nguMsitho ... umsitho
29 Januwari 2020 kwi-23: 54
Besele ndinikezele inqaku kuyo:
30 Januwari 2020 kwi-11: 46
Kuyenzeka kakhulu ukuba i-Netflix yaqala olu luhlu lusuku olu-1 phambi kwetyala lokuqala leentsholongwane ezenziwa yi-corona eyamkelwe yi-WHO. Isihloko soluhlu lwembali yeNetflix: 'Ubhubhane: Ungathintela njani ukuqhuma'
ngaphezulu malunga nosuku lokuqala lwentsholongwane ye-corona apha
Ukuphehlelelwa koxwebhu: NgoJanuwari 8, 2020
Ityala lokuqala le-corona elamkelwe yi-WHO: ngoJanuwari 9, 2020
Jonga i-trailer engezantsi kwaye ufumane 'isisombululo' kwimizuzu eyi-0: 33 endiyithumele kwinqaku.
31 Januwari 2020 kwi-19: 51
Isizathu esingakumbi sokukholelwa ukuba sijongana nokuphila ngokuxakeka, mamela umenzeli kaRothschild uWilbur Ross.
Umnyhadala 201: ECAPS, Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome
1 Februwari 2020 kwi-13: 48
Akukho kofi imsulwa ibonakala kum:
Ngoku, ugqirha ohlonitshwayo wesifo esiye sabamba iflethi ngokubanga ukuba isisongelo se-twitter ukuba intsholongwane ibonakala ngathi iyosulela ngakumbi kunokuba bekukholelwa ekuqaleni ukuba ibalisa ukungahambelani kwemfuza yintsholongwane eyacebisayo ukuba kungenzeka ukuba yaqulunqwa ngezofuzo ngenjongo yesixhobo, kwaye asikho nasiphi na isixhobo kodwa esona sibulala kunazo zonke.
Kwindlela engafaniyo yokufakelwa okhethekileyo kwiproteni ye-spikhi ye-2019-nCoV kwi-HIV-1 gp120 kunye ne-Gag ", abaphandi base-Indiya bayaphazanyiswa ziinxalenye ze-RNA yentsholongwane ezingenanto inxulumene nezinye i-coronavirus ezinje nge-SARS, kwaye endaweni yoko zibonakala zisondele kakhulu. Intsholongwane kaGawulayo. Intsholongwane iphendula ngokulinganayo kunyango ngamayeza e-HIV.
22 Februwari 2020 kwi-14: 15
U-Tedros Adhanom Ghebreyesus wavotelwa nguMlawuli-Jikelele we-WHO ngo-2017 endaweni kaGqirha Margaret Chan wase-Hong Kong. Ungumntu wokuqala wase-Afrika ukukhokela i-arhente yezempilo kwaye eyokuqala ayingugqirha. Ngokuka-Wikipedia, wafumana isidanga se-BA kwi-Biology kwiYunivesithi yase-Asmara e-Eritrea. Waye wakhonza kwisikhundla esisezantsi, kwi-ofisi yezeMpilo ephantsi kolawulo lukaMarxist uMengistu. Emva kokuwa kukaMengistu ngo-1991 uTedros waya e-UK wayokuthatha i-Doctorate of Philosophy (PhD) kwi-Community Health esuka kwiDyunivesithi yase-Nottingham ngo-2000, ngesigqibo esingugqirha malunga "neziphumo zamadama ekusasazeni isifo se-Malariya kwiTigray Region, emantla I-Ethiopia. "
Waqhubeka ke waba nguMphathiswa Wezempilo ukusukela ngo-2005 ukuya ku-2012 phantsi kwe-Nkulumbuso u-Meles Zenawi. Apho yena kunye noMongameli wangaphambili u-Bill Clinton kwaye baqala ukusebenzisana ngokusondeleyo noClinton kunye neClinton Foundation kunye ne-Clinton HIV / AIDS Initiative yayo (CHAI). Uye wakhulisa ubudlelwane obusondeleyo neBill kunye neMelinda Gates Foundation. Njengomphathiswa wezempilo, u-Tedros uza kuba ngusihlalo weNgxowa-mali yeHlabathi yokulwa uGawulayo, isifo sephepha kunye neMalariya eyasekelwa sisiseko seGates. Ingxowa-mali yeHlabathi iye yagcwala ubuqhophololo kunye nezikrebe zenkohlakalo.
Namhlanje abanikeli abakhulu kwi-WHO yindawo ye-Gates Foundation kunye ne-Alliance Union yayo ye-GAVI yogonyo. Ngabadlali basemva njengoGates noClinton ayothusi into yokuba uTedros aqhubeke, emva kokonwaba njengo-Mphathiswa Wezangaphandle wase-Ethiopia, ukuphumelela isikhundla soMlawuli-Jikelele, ngaphandle kokungabikho gqirha wokuqala ukubamba isikhundla.
« Isicwangciso sokugonyela esinyanzelekileyo seNetherlands ngoDisemba ka-2019 sizisiwe
INtflix docu 'Ubhubhani: Ungathintela njani ukuqubuka' kuvakala ngathi kukucwangcisa i-Wuhan corona virus »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.478.788